Danny Rose oo doonaya inuu u dhaqaaqo Man United ama Chelsea – Gool FM
Liibaan Fantastic August 10, 2017
(London) 10 Agoosto 2017 Daafaca kooxda Tottenham ee Danny Rose ayaa doonaya inuu isaga tago kooxdiisa oo uu ku biiro kooxaha waa wayn.
27 jirka reer ingiriis ayaa danaynaya ku biirida kooxaha Chelsea iyo Manchester United midood si uu ugu guulaysto koobab dhawr ah.
“Waxaan gaaray heerkii ugu sareeyay ee xirfadayda, tanina waa fursada kaliya ee aan ku heli karo heshiis wayn, waqtigu waa uu soconayaa aniguna waxaan doonayaa ku guulaysiga koobab” ayuu yiri Danny Rose.
“Aad ayeey u xanuun badantahay ciyaarida kubadda cagta mudo dhan 15 sano adiga oo aan ku guulaysan xitaa hal koob, waan ka xumahay laakiin arinkaas ma ahan mid marnaba aan ku faraxsanahay”.
“Waxaan u dhaqaaqi doonaa dhanka waqooyi, waxaanan u ciyaari doonaa koox kale si aan ugu guulaysto koobab, sidoo kale hooyaday ma booqan mudo dhan 10-sano”.
“Laakiin ma dhahayo waxaan doonayaa inaan si dag dag ah uga tago Tottenham, kaliya waxaan cabirayaa ra’yigayga, haddii aan dalab fiican ka helo kooxaha waa wayn markaas go’aan ayaan ka gaarayaa mustaqbalkeyga”.
Klopp oo ka hadlay xaalka cakiran ee Philippe Coutinho (Muxuu yiri?)